Ilegharị Anya n’Alaka Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova Dị na Filipinz
Mmadụ ò kwesịrị ịgwa anyị mgbe ọ ga-achọ ịbịa legharịa anya? Ee. Iji hụ na ndị bịara ilegharị anya n’otu oge akarịghị akarị, anyị ga-achọ ka ndị ọ bụla ga-abịa ilegharị anya gwa anyị agwa tupu ha abịa n’agbanyeghị ole ha ga-adị. Ya bụrụ n’oge ezumike ka unu ga-achọ ịbịa, biko gwanụ anyị ọ dịkarịala otu ọnwa tupu oge unu ga-abịa eruo.
Ì nwere ike ịkagbu oge ị chọrọ ịbịa legharịa anya ma ọ bụ gbanwee ya? “Lee Oge I Tinyere ma ọ bụ Gbanwee Ya.”
Alaka ụlọ ọrụ a na-asụgharị Ụlọ Nche n’asụsụ iri a ma ama na Filipinz. Na-emepụtakwa vidio na ihe ndị a na-egere egere n’asụsụ iri abụọ. Ha na-ebugara ọgbakọ Ndịàmà Jehova dị 3,472 na Filipinz akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl.Danloduo Akwụkwọ Ga-akọkwuru Gị Ihe Ndị Ọzọ